Akụkọ - ski ski market na China
Okpu agha mara mma
E-bike okpu agha
Igwe okpu igwe
Okpu igwe Bike
Okpu agha Urban
Okpu agha ụmụaka
Innovation Smart Helmet
Shock absorption usoro
Nhazi Hight Tech
Ihe na-adịgide adịgide
ski ski agbam ume na China
Smart akpaka breeki flash ...
E Skuuta okpu V10S
E-Bike skuta V01
Ukpu Bike Mountain VM202
MTB Igwe okpu igwe VM203
Egwuregwu Olimpik nke Oge 2022 emeela ka mmepe nke egwuregwu egwuregwu oge oyi na China, yana ebe ntụrụndụ dị na mpaghara ọ bụla nke China. Naanị n’afọ 2018, enwere ebe ezumike iri iteghete mepere emepe, na ngụkọta nke 742. Ọtụtụ ebe ezumike ski ka anaghị arụ ọrụ naanị otu ma ọ bụ kapeeti anwansi ole na ole, ma ọtụtụ n’ime ha bụ ụzọ ndị mbụ. Naanị ebe ntụrụndụ 25 dị nso na ụkpụrụ Western, anaghị enwekarị ọnọdụ obibi, ọ bụ naanị ọnụ ọgụgụ pere mpe ka enwere ike ịkpọ ezigbo ebe ntụrụndụ. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, enwere ụfọdụ mgbanwe ọhụụ kwa afọ, gụnyere Beidahu, cuiyunshan, Fulong, yundingmiyuan, Wanke Songhua Lake, Taiwu, Wanda Changbai Mountain, Wanlong na Yabuli. N’ọdịnihu, ụfọdụ ebe ezumike a na-arụ ọrụ n’ime oge anọ ga-ejikọtakọ ọnụ. E nwere ebe ntụrụndụ ime ụlọ 26 dị na China (ọtụtụ n'ime ha dị gburugburu Beijing na Shanghai, a ga-enwe ndị ọhụrụ anọ site na 2017 ruo 2019) na 24 100% ogige snow snow na-agagharị na Beijing, nwere nkwụsị elu kachasị elu nke ọtụtụ narị mita.
Ọnụ ọgụgụ ndị na-egwu ski amụbaala nke ukwuu kemgbe 2000. Na 2015, e nyere China onyinye mba nke ndị ọbịa nke Olimpik nke 2022, na-akpaliwanye ịnụ ọkụ n'obi ọha mmadụ maka ịgba ọsọ. N’oge snow ole na ole gara aga, ịrị elu dị ukwuu. N'oge 2018/19 snow, ọnụ ọgụgụ ndị na-agba ịnyịnya mmiri fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 20, ọnụ ọgụgụ ndị njem nlegharị na-arịwanye elu kwa afọ. N'oge na-adịghị anya China ga-abụ nnukwu onye egwuregwu na ụlọ ọrụ ski.
Ihe ịma aka nke ahịa ndị na-agba ọsọ na China bụ usoro nke ịmụ ski. Maka ndị mbido, ọ bụrụ na ahụmịhe mbụ ị na-eme adịghị mma, ọnụego nlọghachi ga-adị obere. Agbanyeghị, ebe ntụrụndụ ndị China na-abụkarị ndị juputara na igwe, enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-enweghị njikwa, ọnọdụ izizi ski mbụ adịghị mma. Dabere na nke a, a na-eme usoro izizi ihe eji eme ihe banyere ugwu ugwu maka ndị na-agba ịnyịnya na-anọ ebe izu maka izu, nke na-adabaghị maka ọnọdụ oriri ugbu a nke China. Ya mere, ihe kachasị mkpa China bụ ịzụlite usoro izizi nke kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ mba China, weghaara nnukwu ahịa ịgba ọsọ na China, kama ịhapụ ha ka ha nwee oge ịgba ọsọ.
Akwụkwọ ọcha na ụlọ ọrụ ski (akụkọ 2019 kwa afọ)
Isi otu ebe egwuregwu ski na njem ski
Ebe a na-agba ọsọ na ndị na-agba ọsọ bụ okporo osisi abụọ nke ụlọ ọrụ ịgba ọsọ zuru ezu, yana azụmaahịa na ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ski na-agba gburugburu.
Gburugburu osisi. Ya mere, ọnụ ọgụgụ nke ebe egwuregwu ski na ọnụ ọgụgụ ndị na-agba ski bụ isi nke ụlọ ọrụ ski
Ihe ngosi. Dabere na ọnọdụ dị na China, anyị na-ekewa egwuregwu ski n'ime ebe ntụrụndụ (gụnyere ebe ntụrụndụ ski na ntụrụndụ)
Ime ụlọ ski ski, akọrọ mkpọda na simulated ski mgbatị.
1, Ọnụ ọgụgụ nke ebe ezumike ski, skiers na skiers
Na 2019, a ga-enwe ebe ntụrụndụ ọhụrụ 28 na China, gụnyere ebe ntụrụndụ ime ụlọ 5, na ngụkọta nke 770
Onu ogugu bu 3,77%. N'ime ụlọ ezumike 28 ndị agbakwunyere ọhụrụ, 5 ewuola ọwa mmiri, ọzọ emeghewokwa
Wayzọ eriri igwe ọhụrụ. Ka ọ na-erule ngwụsị nke 2019, nke ugbo ugbo 770 dị na China, ọnụọgụ ntụrụndụ nke nwere ebe ikuku na-erute 100%
155, mmụba nke 4.03% ma e jiri ya tụnyere 149 na 2018. Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-egwu ski na ntụrụndụ ụlọ na-arị elu site na 2018
Site na nde 19.7 na 2013 ruo nde 20.9 na 2019, mmụba kwa afọ nke 6.09%.
E gosipụtara ọnụ ọgụgụ ebe ntụrụndụ ski na ọnụ ọgụgụ ndị na-agba ski na Ọgụgụ 1-1.
Ọgụgụ 1-1: Statistics nke ebe ntụrụndụ na ski na China
Ka oge Beijing na-abịa maka Winter Olympics, ụdị ọrụ ịgba ọsọ ski niile na-emepe n'ụzọ nke mmikpu dị omimi
E mere ka ọnụego mgbanwe dịwanye mma. Dabere na ngụkọta nke akụkọ a, a ga-enwe ihe dịka 13.05 nde ndị na-agba ọsọ n'elu ụlọ na 2019,
E jiri ya tụnyere nde 13.2 na 2018, ọ pere mpe. N'ime ha, ọnụọgụ ndị na-agba ọsọ nwere ahụmịhe otu oge rịrị elu site na 30% na 2018
38% gaa na 72. 04%, na ọnụọgụ nke ndị na-egwu skiers mụbara. Skiers na China na 2019
Ọnụọgụ nke ịgba ọsọ n'isi n'isi rịrị elu site na 1.49 na 2018 ruo 1.60.
Nyocha nke 1-2: ski ski & skiers
Post oge: Feb-03-2021
Egwuregwu dị mkpa bụ ụlọ ọrụ na-eduga okpu agha nwere ihe karịrị afọ 15 nwere ahụmịhe nke kachasị elu na okpu agha mara mma, okpu e-igwe, okpu igwe, okpu igwe, ike okpu agha, okpu igwe. Chọta na Dongguan China, 45minutes dị anya na Hong Kong.
Nke 12, Linhai Road, Mba Shatian, Mei County, Dongguan City, Guangdong Province, China